तनावमा पेट पोल्ने र दिसा लाग्ने हुन्छ ? हुन्छ भने यति जानकारी लिइराख्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
पेट पोल्नुको विभिन्न कारणहरु मध्ये तनाव पनि हुन सक्छ । तपाईले यसबारे जानकारी लिनु भएको छ ? तनावमा पेट पोल्ने र दिसा लाग्ने हुन्छ ? हुन्छ भने यति जानकारी लिइराख्नुहोस् । उपयोगी हुन सक्छ ।
कामको हतारले दिमाग रन्थनिएको बेला होस् या तनावको बोझले थिचिएको बेला ।
कुनै चिज पाउँदाको खुसीले मन भरिएको होस् वा केही गुमाउँदाको पीडाले दुःखी ।
कुनै योजनाले व्यग्र बनाउँदा होस् वा कुनै योजना पूरा नहुँदाको छट्पटी ।
यी सबै बेला दिमाग त भारी हुन्छ नै, पेट पनि कता–कता गह्रौं भएको वा पोलेको महशुस गर्नुभएको छ ?
छ भने त्यो सामान्य हो ।
त्यो पेट पोलेको होइन । बरु पेटमा हुने ‘दोस्रो मस्तिष्क’ ले हाम्रो उत्तेजना, आवेग, हर्ष वा विस्मातमा प्रतिक्रिया जनाएको हो ।
अब तपाईं सोध्न सक्नुहुन्छ, मस्तिष्क त हाम्रो टाउकोमा पो हुन्छ ! पेटमा यो दोस्रो मस्तिष्क कहाँबाट आयो ?
टाउकोमा हुने मस्तिष्क हाम्रो स्नायू प्रणालीको एउटा हिस्सा हो । यसले हाम्रो शरीरका सबै अंग नियन्त्रण गर्छ, आदेश दिन्छ, प्रतिक्रिया जनाउँछ । यो सँगसँगै हाम्रो शरीरमा अर्को स्नायू प्रणाली पनि हुन्छ, जुन घाँटीदेखि मलाशयसम्म फैलिएको हुन्छ ।
अब तपाईं सोध्नुहोला, घाँटीदेखि मलाशयसम्मको भाग त पाचन प्रणालीको हो । हो, यो पाचन प्रणाली नै हो । यही पाचन प्रणालीका अंगमा १० करोड यस्ता स्नायू कोष गुजुल्टिएर बसेका हुन्छन्, जसले हाम्रो मस्तिष्कले झैं प्रतिक्रिया जनाउँछन् । यसैलाई वैज्ञानिकहरू ‘दोस्रो मस्तिष्क’ भन्छन् ।
Don't Miss it के तपाइ तनावमा हुनुन्छ ? दिमागी सन्तुलनका लागी यसो गर्नुहोस्
Up Next जाडो मौसममा छाला र ओठ फुट्ने समस्या कसरी ठिक पार्ने ? केहि सजिला उपायहरु